Post byဘဂၤလု႐ု on Friday, February 09,2018
အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ ငါးမွတ္တန္ ဆန္ တစ္တန္ေစ်းဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ေဒၚလာအထိ က်သြားခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုအခါမွာေတာ့ ဆန္တစ္တန္ဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၂ ကေန ၄၃၆ အထိသာ ရွိပါေတာ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္အထိကေတာ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ ဆန္ေစ်းဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အျမင့္ဆံုးအထိ တက္ သြားခဲ့ပါတယ္။
“ ထိုင္းႏုိင္ငံဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ေစ်းျဖတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါမွာ ဆန္၀ယ္သူေတြဟာ ေနာက္ထပ္ ဆန္ေစ်း ထပ္ေလွ်ာ့ခ်ေစခ်င္ၾက ပါတယ္” လို႔ အန္ဒရာပရာဒက္ရွ္အေျခစိုက္ ကုန္သည္တစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။
႐ူပီးေစ်းက်တဲ့အတြက္ ဆန္တင္ပို႔ေနတဲ့ ကုန္သည္ေတြဟာ ဆန္ေစ်းကို ေဒၚလာအနည္းငယ္ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္း ေနတယ္လို႔ ကုန္သည္တစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။
ဒီလထဲမွာေတာ့ ႐ူပီးေစ်းႏႈန္းဟာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့တဲ့အတြက္ ဆန္တင္ပို႔ေနတဲ့ ကုန္သည္ ေတြ အက်ိဳးအျမတ္ ပိုရလာပါတယ္။
အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ ႐ုိး႐ိုးဆန္တင္ပို႔မႈဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကထက္ ၃၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ၿပီး တန္ခ်ိန္ ၆ဒသမ၃၄ သန္းတင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ငါးမွတ္ဆန္ကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က တစ္တန္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄၃ ကေန ၄၄၆ ရွိေန ရာက ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၀ ကေန ၄၃၀ အထိပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ကုန္ေလာက္မွာ ဆန္အသစ္ေတြ ၀င္လာမွာရယ္၊ ျပည္ပကို တင္ပို႔ေရးစာခ်ဳပ္ေတြ နည္းေနတာေတြေၾကာင့္ အ ခုလုိက်သြားတာလုိ႔ ကုန္သည္ေတြက ဆိုပါတယ္။
“ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားေစ်းကြက္ကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ဆန္၀ယ္မယ့္ အလားအလာရွိၿပီး ဆန္ေစ်းတက္လာႏိုင္ပါတယ္” လို႔ ထုိင္းဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ဆန္၀ယ္ယူေရး ေအဂ်င္စီဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔က ကုမၸဏီေျခာက္ခုနဲ႔ တန္ခ်ိန္ ၂၈၁,၀၀၀ ၀ယ္ယူတင္သြင္းဖုိ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံဟာ ဗီယက္နမ္ကေန ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၄၁,၀၀၀၊ ထိုင္းႏုိင္ငံကေန ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၂၀,၀၀၀ နဲ႔ အိ ႏၵိယႏုိင္ငံကေန ဆန္တန္ခိ်န္ ၂၀,၀၀၀ ၀ယ္ယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းကုန္သည္ေတြဟာ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ ဘက္က အ၀ယ္လိုက္လာမယ့္ အေနအထားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။
ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဆန္သိုေလွာင္ထားမႈဟာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္အတြင္း အနည္းဆံုးေရာက္ေနေပမယ့္ အာဏာပိုင္ ေတြကေတာ့ အေလာတႀကီး ဆန္တင္သြင္းဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွာလည္း ဆန္ေစ်းေတြ က်ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ႏွစ္သစ္ကူးေၾကာင့္လည္း အခုလို ဆန္ေစ်းက် တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ကုန္သည္ေတြက ဆိုပါတယ္။
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ငါးမွတ္ဆန္ တစ္တန္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္တုန္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄၀ ကေန ၄၅၀ ရွိေန ရာက ယခုအခါမွာေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၀ ကေန ၄၂၅ ေဒၚလာသာ ရွိပါေတာ့တယ္။
“ ေစ်းကြက္ထဲက လူေတြက ေလွာင္ထားတာေတြ ထုတ္ေရာင္းေနၾကတယ္။ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အတြက္ ျပင္ ဆင္ေနၾကတယ္။ ကုန္သြယ္မႈကို ဘယ္သူမွ ဂ႐ုမစိုက္အားဘူး” လို႔ ဟိုခ်ီမင္းအေျခစိုက္ ကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။
ဆန္အသစ္ေတြ ၀င္လာေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ မတ္လဆန္းပိုင္းမွာ ဆန္ေစ်းထပ္ က်ဖုိ႔ ရွိေနတယ္လုိ႔ ကုန္သည္ေတြက ဆုိပါတယ္။
ရူပီးစျေးကျဆင်းလာတာနဲ့အတူ စျေးကွက်အတွင်းမှာ ဆန်အရောင်းအဝယ် နှေးကွေးလာတာကြောင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံရဲ့ ဆန်စျေးက သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်အထိတော့ ဆန်စျေးဟာ နှစ်ပေါင်း များစွာအတွင်း အမြင့်ဆုံးအထိ တက်ခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ငါးမှတ်တန် ဆန် တစ်တန်စျေးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ ဒေါ်လာအထိ ကျသွားခဲ့တဲ့အတွက် ယခုအခါမှာတော့ ဆန်တစ်တန်ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၃၂ ကနေ ၄၃၆ အထိသာ ရှိပါတော့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်အထိကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဆန်စျေးဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကနေ လက်ရှိအချိန်အထိ အမြင့်ဆုံးအထိ တက် သွားခဲ့ပါတယ်။
“ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ စျေးဖြတ်ချခဲ့ပါတယ်။ အခုအခါမှာ ဆန်ဝယ်သူတွေဟာ နောက်ထပ် ဆန်စျေး ထပ်လျှော့ချစေချင်ကြ ပါတယ်” လို့ အန်ဒရာပရာဒက်ရှ်အခြေစိုက် ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ရူပီးစျေးကျတဲ့အတွက် ဆန်တင်ပို့နေတဲ့ ကုန်သည်တွေဟာ ဆန်စျေးကို ဒေါ်လာအနည်းငယ် စျေးလျှော့ရောင်း နေတယ်လို့ ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ဒီလထဲမှာတော့ ရူပီးစျေးနှုန်းဟာ တစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော် လျော့ကျသွားခဲ့တဲ့အတွက် ဆန်တင်ပို့နေတဲ့ ကုန်သည် တွေ အကျိုးအမြတ် ပိုရလာပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရိုးဆန်တင်ပို့မှုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် ၃၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုများပြားခဲ့ပြီး တန်ချိန် ၆ဒသမ၃၄ သန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ငါးမှတ်ဆန်ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က တစ်တန်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၄၃ ကနေ ၄၄၆ ရှိနေ ရာက ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၂၀ ကနေ ၄၃၀ အထိပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ကုန်လောက်မှာ ဆန်အသစ်တွေ ၀င်လာမှာရယ်၊ ပြည်ပကို တင်ပို့ရေးစာချုပ်တွေ နည်းနေတာတွေကြောင့် အ ခုလိုကျသွားတာလို့ ကုန်သည်တွေက ဆိုပါတယ်။
“ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားစျေးကွက်ကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ သူတို့အနေနဲ့ နောက်ထပ် ဆန်ဝယ်မယ့် အလားအလာရှိပြီး ဆန်စျေးတက်လာနိုင်ပါတယ်” လို့ ထိုင်းဆန်ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ ဆန်ဝယ်ယူရေး အေဂျင်စီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကုမ္ပဏီခြောက်ခုနဲ့ တန်ချိန် ၂၈၁,၀၀၀ ၀ယ်ယူတင်သွင်းဖို့ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ဗီယက်နမ်ကနေ ဆန်တန်ချိန် ၁၄၁,၀၀၀၊ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ဆန်တန်ချိန် ၁၂၀,၀၀၀ နဲ့ အိ န္ဒိယနိုင်ငံကနေ ဆန်တန်ချိန် ၂၀,၀၀၀ ၀ယ်ယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းကုန်သည်တွေဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဘက်က အဝယ်လိုက်လာမယ့် အနေအထားကို စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ ဆန်သိုလှောင်ထားမှုဟာ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်အတွင်း အနည်းဆုံးရောက်နေပေမယ့် အာဏာပိုင် တွေကတော့ အလောတကြီး ဆန်တင်သွင်းဖို့ မလိုဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်း ဆန်စျေးတွေ ကျနေပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့နှစ်သစ်ကူးကြောင့်လည်း အခုလို ဆန်စျေးကျ တာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကုန်သည်တွေက ဆိုပါတယ်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ငါးမှတ်ဆန် တစ်တန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၄၀ ကနေ ၄၅၀ ရှိနေ ရာက ယခုအခါမှာတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၂၀ ကနေ ၄၂၅ ဒေါ်လာသာ ရှိပါတော့တယ်။
“ စျေးကွက်ထဲက လူတွေက လှောင်ထားတာတွေ ထုတ်ရောင်းနေကြတယ်။ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်အတွက် ပြင် ဆင်နေကြတယ်။ ကုန်သွယ်မှုကို ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်အားဘူး” လို့ ဟိုချီမင်းအခြေစိုက် ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ဆန်အသစ်တွေ ၀င်လာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ နှောင်းပိုင်းနဲ့ မတ်လဆန်းပိုင်းမှာ ဆန်စျေးထပ် ကျဖို့ ရှိနေတယ်လို့ ကုန်သည်တွေက ဆိုပါတယ်။
Thank youalot for providing individuals with an exceptionally wonderful chance to read in detail from this site. It is always very useful plus full of fun for me personally and my office mates to search the blog on the least thriceaweek to learn the new guides you have got. Of course, we're at all times impressed concerning the eye-popping tips you serve. Certain 1 areas in this post are unquestionably the most efficient we have had. yeezy boost 350 v2
by yeezy boost 350 v2 at May 19 2019
I wanted to write downaquick word to thank you for these splendid concepts you are placing on this site. My rather long internet search has at the end been paid with brilliant points to exchange with my friends and family. I 'd mention that many of us visitors actually are rather lucky to live inavery good website with many wonderful people with interesting tricks. I feel really blessed to have encountered the website page and look forward to really more thrilling moments reading here. Thanks again for everything. asics running shoes [url=http://www.asics-shoes.us.org]asics running shoes[/url]
by asics running shoes at May 10 2019
I have to express thanks to this writer for rescuing me from this situation. Just after searching through the the web and coming across ways which are not helpful, I figured my life was gone. Living minus the strategies to the issues you have fixed through your main write-up isaserious case, as well as those which may have adversely affected my career if I hadn't noticed your website. Your own personal mastery and kindness in playing with the whole lot was crucial. I don't know what I would've done if I hadn't encountered suchastep like this. I can also at this time look ahead to my future. Thank you so much for this expert and effective guide. I won't think twice to propose your web blog to any person who requires guide on this matter.
by http://www.coachoutlets.name at May 06 2019